Apple rịọ mgbaghara ma wedata ọnụahịa nke mgbanwe batrị iPhone | Akụkọ akụrụngwa
Iwu na-arị elu na Apple. Ikwu eziokwu banyere ngwa ngwa nke iPhones ndị okenye na-adịghị arụ ọrụ mgbe batrị anaghịzi arụ ọrụ na XNUMX pasent adịghị nke ọma na ndị na - azụ ahịa - ma ọ bụ eziokwu. Nke a bụ iwe na Apple enweela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpesa iri na abụọ site na mba dị iche iche, ịbụ onye French kacha sie ike.
Maka ihe a niile, ma gbalịa ka onyinyo nke ụlọ ọrụ ahụ ghara ịnọgide na-emerụ ahụ, emewo ka a ọkwa na ibe ya nke kachasị, ọ rịọrọ mgbaghara maka nghọtahie ahụ. N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwupụta ihe ọrụ batrị ahụ dị na ntọala niile.
Agbanyeghị, enwere ike ịnwe nghọtahie n'okwu a: Apple kpebiri n'onwe ya - na-enweghị ikikere nke onye ọrụ na ajụjụ - na arụmọrụ nke ọnụ gị kwesịrị ịgbada n'ihi na ị gbanwebeghị batrị nke iPhone gị, ọ nwere ike ịbụ atụle omume ezighi ezi. Fọdụ na-egosi na anyị ga-eji ọtụtụ vaunted "obsolescence program" ọzọ gwuo egwu. Ma ọ bụ tinye ụzọ ọzọ: ị chọrọ ka gị iPhone ịrụ dị ka tupu? Gaa na igbe. Mgbaghara mgbaghara Apple na-adabere na ahụmịhe onye ọrụ nwere ike ịnweta nke nwere ike ịpụta na itinyeghị arụmọrụ ahụ dị ala na njedebe.
Na ihe a niile, mgbanwe nke batrị ọnụ site na iPhone 6 n'ihu na nke na-abụghị akwụkwọ ikike ga-efu $ 50 obere (site na $ 79 ruo $ 29). Nke a na ezu Ọ ga-eme gburugburu ụwa ma dị irè n'ime afọ 2018 niile. N'ezie, n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ Apple ga-ebipụta ozi ndị ọzọ gbasara ọnụahịa na mba ndị ọzọ na otu esi edozi oge nnọchi nke ụdị ọ bụla.
N'otu aka ahụ, Apple kwukwara na n'oge 2018, a ga-ewepụta ụdị ọhụrụ nke iOS nke ga - enye onye ọrụ ihe omuma banyere ahụike nke batrị ha na otu o si emetụta arụmọrụ zuru oke. N'ikpeazụ, Apple ahịrịokwu ya na paragraf na-esonụ:
Na Apple, ntụkwasị obi ndị ahịa anyị bụ ihe niile nye anyị. Anyị agaghị akwụsị ịrụ ọrụ iji nweta ya ma debe ya. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ anyị hụrụ n'anya naanị n'ihi okwukwe na nkwado gị. Anyị agaghị echefu ma ọ bụ jiri ya gwurie egwu.
Kpọrọ Apple? Na mkpebi ndị a dị iche iche gbasara akụrụngwa nke ndị ahịa ị hụrụ n'anya, I nwere ike izo aka n’okwukwe nke ha nwere na gi ma ha na-akwado gi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Apple rịọ mgbaghara ma belata ọnụahịa nke mgbanwe batrị iPhone